गलत निर्णयले हारेको थियो पञ्जाब, हुँदैछ अम्पायरको चर्को आलोचना »
आईपीएल : हैदराबादविरुद्ध दिल्ली हार्नुका प्रमुख ३ कारण
राशिदले घातक बलिङ गर्दा दिल्लीको फराकिलो हार
दिल्लीविरुद्ध राशिदको घातक बलिङ, पहिलो ओभरमै लिए २ विकेट
हैदराबादले दियो दिल्लीलाई विशाल लक्ष्य, पिटिए बलर!
हैदराबादको विस्फोटक ब्याटिङ, पिटिए दिल्लीका बलर
लंका प्रिमियर लिग : आन्द्रेसहित ५ विदेशी खेलाडीले लिए नाम फिर्ता
Home/खेलकुद/गलत निर्णयले हारेको थियो पञ्जाब, हुँदैछ अम्पायरको चर्को आलोचना
काठमाडौं, ५ असाेज : १३औँ संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल)को दोस्रो खेल एकदम रोमाञ्चक रह्यो।
दिल्ली क्यापिटल्स र किंग्स इलेवन पञ्जाबबीचको खेल बराबरी भयो। दुबै टोलीले निर्धारित २० ओभरमा आठ विकेट गुमाएर १५७ रन बनाए।
त्यसपछि सुपर ओभरबाटमा निर्णय लिइयो। जसमा दिल्ली विजयी भयो। यद्यपि, यदि अम्पायर नितिन मेननले गल्ती नगरेको भए, खेल सुपर ओभरमा जाने थिएन र पञ्जाबले जित हासिल गर्ने थियो।
वास्तवमा, नितिन मेननले पञ्जाबको दुई रनलाई सर्ट रनको रूपमा १ रन दिए। तर, त्यो सर्ट रन थिएन। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेन्दर सहवाग अम्पायरको निर्णयबाट सन्तुष्ट छैनन्। सहवागले अम्पायरप्रति ब्याङ्ग्य गर्दै उनलाई ‘म्यान अफ दि म्याच’ दिइनुपर्ने बताए।
कहाँ चुके अम्पायर नितिन?
पञ्जाबले १५८ रनको लक्ष्य पाएको थियो। अन्तिम १० बलमा उसलाई जितका लागि २१ रन चाहियो। मयंका अग्रवाल एकदम राम्रो ब्याटि गर्दै पञ्जाबलाई विजयतर्फ धकेल्दै थिए। अर्को छेउमा इंग्ल्यान्डका क्रिस जोर्डन थिए।
कागिसो रबाडा १९औं ओभरमा दिल्लीका लागि बलिङ गर्न आए। मयंकले उनको दोस्रो बलमा शानदार चार रन हिर्काए। अर्को बलमा उनले दुई रन बनाए। तर, यसलाई अम्पायर नितिन मेननले सर्ट रनको संकेत दिए।
नितिनका अनुसार जोर्डनले पहिलो रन पूरा गर्दा ब्याट क्रीजभित्र राखेनन्। यसकारण पञ्जाबले केवल एक रन पायो, तर टिभी रिप्लेमा यो स्पष्ट देखिन्छ कि जोर्डनले क्रीजभित्र ब्याट राखेका थिए। पञ्जाबले २ रन पाउनु पर्दथ्यो। तर, अम्पायरको गलत निर्णयका कारण पञ्जाबले एक रन मात्रै पायो। नतिजा स्वरूप खेल बराबरी भयो र पञ्जाब सुपर ओभरमा हार्यो।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेन्द्र सहवाग र आकाश चोपडाले अम्पायर नितिन मेननको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सहवागले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘म्यान अफ द म्याचको छनौटसँग म सहमत छैन। सर्ट रन दिएका अम्पायरलाई ‘म्यान अफ द म्याच’ हुनुपर्दछ। यो सर्ट रन थिएन र त्यसले भिन्नता ल्यायो।’
चोपडा र दिल्ली डेयरडेभिल्सका पूर्व प्रशिक्षक ट्रेन्ट वुडहिलले पिचको आलोचना पनि गरेका छन्। ‘किन प्राविधिक प्रयोग भएको थिएन? चोपडाले ट्वीटमा लेखेको छन्, ‘सर्ट रन थिएन। टेक्नोलोजी त्यस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्दछ।’
आईपीएल २०२० : राम्रो ‘इकोनोमी’मा बलिङ गर्ने ३ बलर